मिरिक विकासः तृणमूलको निम्ति अवसर कि चुनौति? – खबरम्यागजिन
Homeखबरमिरिकमिरिक विकासः तृणमूलको निम्ति अवसर कि चुनौति?
मिरिक विकासः तृणमूलको निम्ति अवसर कि चुनौति?
June 4, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मिरिक 0
मिरिक,4जुन।
दार्जीलिङ पहाडमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एकल राजनैतिक वर्चस्व रहिरहेको अवस्थामाझ पहिलोचोटि मिरिक नगरपालिकामा तृणमूल कङ्ग्रेसले मोर्चालाई हराएर बोर्ड गठन गरिसकेको अवस्था छ। एकातिर तृणमूल कङ्ग्रेसले पहाड विकासको वकालत गर्दै आइरहेको भएपनि आजसम्म पहाडको कुनै पनि निकायमा तृणमूलले दलीय झण्डा गाड्न सकेको थिएन। यद्यपि दार्जीलिङ, खरसाह अनि कालेबुङमा मोर्चाले बोर्ड गठन गरे पनि मिरिकमा भने तृणमूलले चुनाउ मात्र जितेन तर मिरिकमा विकास गरेर देखाउने अवसर पनि पाएको छ।
यसैले के अब मिरिकले सोचे भन्दा ज्यादा विकास पाउने छ? यो प्रश्न आज हरेक मिरिकवासीमा रहेको छ। मिरिक नगरपालिकाको चुनाउ परिणामपछि राज्यको सत्ताधारी दल तृणमूल कङ्ग्रेस अनि जीटीएका सत्तारुढ दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले मिरिकमा धेरै विकास गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गरिसकेको छ। यस्तोमा कसले कति मिरिकको विकास गर्ने हो चासोको विषय बनेको छ।
मिरिक नगरपालिका चुनाउमा विजय भएर बोर्ड गठन गरेपछि एकातिर तृणमूल कङ्ग्रेसले मिरिकलाई विकासको क्षेत्रमा अग्रसर गराउने बताएको छ भने अर्कोतिर जीटीएले पनि मिरिकलाई विकास गरेर लाने बताएको छ। यतिबेला मिरिकको सर्वाङ्गिन बिकास कसले र कसरी गर्ने हो मिरिकबासी हेर्न तयार छन्।
राज्यका पीडब्ल्यूडी मन्त्री अरूप विश्वासको भनाइमा तृणमूल कङ्ग्रेसले मिरिक नगरपालिकाको बोर्ड गठन गरेपछि राज्यका मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी धेरै खुशी छन्। यही खुशीमा मुख्यमन्त्रीले धेरै विकासको पोको लिएर मिरिक आइरहेकी छिन। मुख्यमन्त्रीले आफै मिरिक आएर विकासको पोको खोल्नेछन्।
यस्तोमा मुख्यमन्त्रीको विकासको पोकोमा के के रहने छ मिरिकवासीमा जिज्ञासा रहेको छ। मिरिकमा केही दिन अघि धन्यवाद सभा गरेर जीटीए प्रमुख विमल गुरुङले मिरिकमा विकास गर्ने बताउँदै विकास कसले धेरै गर्नेछ हेर्नु भन्दै आफूले मिरिकमा पर्याप्त विकास गर्ने दावी गरेका थिए। यस्तोमा मिरिकलाई विकास गर्ने दिशामा राज्य अनि जीटीएमाझ प्रतिस्पर्धा भएपनि त्यसको सोझो फाइदा मिरिकवासीलाई नै हुनेछ। मिरिकमा कसले अनि कति विकास गर्नसक्छ कसैले किटान गरेर भन्न नसके पनि मिरिकमा वर्तमानमा धेरै समस्या र अभावहरू रहेको कसैबाट लुक्न सकेको छैन। मिरिकमा आज पनि मानिसहरूब धेरै विरामी भएको खण्डमा सिलगढी अथवा अन्यत्र उपचारको लानुपर्ने स्थिति यहाँका धेरै गाउँ बस्तीमा यातायातको उचित ब्यवस्था छैन। हिउँदोमा खानेपानीको समस्या सँधै जटिल बन्छ भने यहाँको कृषि अनि बागवानी श्रेत्रमा ठोष पहल भएको छैन।
भौगोलिक दृष्टिकोणले मिरिकलाई फूल खेतीको लागि उपयुक्त मानिए पनि यहाँका फूल उत्पादकहरूले भने जस्तो सरकारी सहयोग र सहुलियतहरू नपाएको अनि आफ्नै लगानी र बलबुतामा फूल उत्पादकहरू फूल खेती गर्न बाध्य छन। सरकारले यहाँको फूल उद्योगलाई विकसित गरेको खण्डमा यहाँको वेरोजगारी समस्या धेरै समधान हुन साथै यहाँको पर्यटन उद्योगलाई विकसित गर्न पनि टेवा पुग्नेछ। मिरिकको अधिकांश ठाउँमा कृषि गरिन्छ। यहाँ पाइने सुन्तलाको बेग्लै महत्त्व रहेको छ। तर सरकारले कृषकहरूको हितमा हालसम्म कुनै ठोष कार्य नगरेको गुनासो गर्ने कृषकहरूका निम्ति सिचाँईको समेत उचित व्यवस्था छैन। पर्यटनको लागि मिरिक चिनिएको नाम भएपनि कतिपय अभाव र समस्याको कारण यहाँ एक दिन भन्दा धेर पर्यटकहरू बस्दैन।
यहाँ ट्राफिक र पार्किङको समस्या पनि जटिल बनिरहेको छ। यस्ता अनेक समस्याहरू रहेको मिरिकमा विकास गर्छौ भन्ने दलहरूले कसरी यहाँको अभाव र समस्याको समाधान गर्ने हो चासोको विषय बनेको छ। मिरिकमा बेरोजगारी समस्या पनि जटिल बन्दै गइरहेको छ। रोजगारको उचित व्यवस्था नभएको कारण आज यहाँका धेरे शिक्षित युवक-युवतीहरू कामको खोजीमा खाडी देश अनि भारतका महानगरहरू जस्तै दिल्ली ,मुम्बई ,बेङलुरू, गुजरात आदि ठाउँमा जान बाध्य छन। शिक्षित बेरोजगारहरूलाई रोजगारको उचित व्यवस्था गर्ने दयित्व पनि शासक दलहरूको रहेको छ। मिरिकले महकुमाको दर्जा पाइसकेपछि यहाँ धेरै विभागहरू सञ्चालनमा ल्याएर स्थानीय बेरोगारहरूलाई रोजगारको अवसर प्रदान गर्ने दायित्व पनि अब सरकारको रहेको छ।
यहाँका धेरै सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको धेरै रिक्द पद रहेपनि नियुक्ति प्रक्रिया भएको छैन। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गरेर बेरोजगारहरूलाई रोजगार उपल्बध गराउने दायित्व पनि सरकार पक्षले लिनपर्ने धेरैको भनाइ छ। यता मिरिकबासीले लामो समयदेखि आफू बसेको जमीनको पर्जापट्टाको माग गरिरहेका छन्। जसको लागि सर्वेक्षण पनि भइसकेको छ। सरकारले मिरिकवासीलाई पर्जापट्टा दिलाउनको लागि पनि विशेष पहल गर्नुपर्ने मिरिकवासीको माग रहेको छ। मिरिकको विकास गर्छौँ भन्नेहरूले मिरिकवासीको समस्या र अभावलाई पूरा गर्न सक्ने हो या होइन समयले नै बताउनेछ। तर मिरिकबासीले राज्य अनि जीटीएबाट समस्याको समधान हुने ठूलो आशा राखेका छन्।
तृणमूलको बोर्डले दियो पानी
शब्दयात्रा-को रोमाञ्च र जोखिम